Ao Tanzania, Olana Lehibe Iray Ny Aretina Hepatita, Fa Mbola ny VIH/SIDA Aloha No Tena Mamono Betsaka · Global Voices teny Malagasy
Ao Tanzania, Olana Lehibe Iray Ny Aretina Hepatita, Fa Mbola ny VIH/SIDA Aloha No Tena Mamono Betsaka
Voadika ny 31 Oktobra 2017 11:28 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, عربي, Português, English
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany indrindra tao amin'ny PesaCheck.org, vohikala iray ahafahana manamarina ny zava-mitranga rehetra ao Afrika Atsinanana.
Tany anatinà tantara iray navoakan'ny gazety The Citizen tao Tanzania, dia voalaza fa nanao fanambarana i Dr. John Lwegasha, filohan'ny Fikambanana miandraikitra ny fandalinana sy fanasitranana ny aretin'ny taovam-pandevonan-kanina sy ny aty ao amin'ny Hopitaly nasionalin'i Muhimbili, hoe ny aretin'ny hepatita B no tena tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'olona maro vokatry ny aretina mifindra raha mitaha amin'ny VIH.
Hoy izy :“Ao Tanzania, mihoatra ny tahan'ny fifindran'ny aretina VIH izay mbola 6 isan-jato monja ny tahan'ny fifindran'ny aretina hépatite B, izay 8 isan-jato raha araka ny angondrakitra vao haingana nomen'ny Birao Nasionaly mandalina ny momba ny antontan'isa (NBS),”. “Izay no ilazàna fa ny hepatita B no hamoizana ain'olona maro nohon”ny [sic] VIH.”
Ny hepatita dia aretin'aty mety hiteraka fahafatesana, izay matetika no vokatry ny viriosy, fa misy ifandraisany amin'ny fisotroana toaka diso tafahoatra loatra ihany koa, ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy misy fiarovana, ny poizina ary ireo aretin'ny hery fanefitra.
Ny viriosin'ny hepatita A sy E dia mifindra voalohany indrindra amin'ny alàlan'ny rano voaloton'ilay viriosy, sakafo toy ny hazandranomasina, ary legioma manta na voankazo nokarakarainà olona voan'io aretina io. Miparitaka be eny amin'ny olona monina eny amin'ny toerana maloto tsy ampy fotodrafitrasa amin'ny resaka fidiovana ilay otrikaretina.
Etsy ankilany indray, ny hepatita B sy C dia mifindra amin'ny alalan'ny rà misy an'io aretina io, firaisana ara-nofo tsy voaaro, fitaovana ampiasain'ny olona misy ny aretina toy ny fanjaitra, ny hareza, ny fitaovana fitsaboana na ampiasaina amin'ny nify, ny famindràna rà tsy nandalo fitiliana, na ny avy amin'ny reny mifindra amin'ny zanaka aterany.
Raha ny nambaran'ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Fahasalamàna, dia mahavoa olona 400 tapitrisa amin'ny ankapobeny ny otrikaretin'ny hepatita, ary raha jerena amin'ny fiparitahany izay haingana dia haingana, dia atahorana ho voan'io aretina io ny tsirairay avy.
Manerana izao tontolo izao, azo tombatombanana ho 95% amin'ireo olona voa an'ny hepatita no tsy tonga saina hoe voan'io aretina io. Mety manahirana sy lafo vidy ny fitiliana ny otrikaretin'ny hepatita, miaraka amin'ny hoe laboratoara tsizarizary any amin'ny firenena maro, anisan'izany i Tanzania, satria dia 470.000 shillings Tanzaniana no sandan'ny fanombanana ny valin'ny fitiliana sy ny fakankevitra any amin'ny dokotera (21 dolara Amerikana) ary mitentina 250.000 shillings Tanzaniana (111 dollara) isambolana ny fitsaboana ny aretina mandritra ny fotoana voafetra hanaovana izany.
Ny angondrakitry ny AVERT izay Fikambanana miasa maimaimpoana amin'ny fanasitranana ny tsimokaretina VIH/SIDA dia maneho fa Tanzaniana 33.000 no mamoy ny ainy isantaona vokatry ny fahasarotan'ny fitsaboana ny aretina VIH/SIDA. Raha betsaka ny vaovao voaray vokatry ny karoka natao momba ny fahafatesan'ny olona voan'ny otrikaretina VIH, dia sarotra kokoa ny mahita antontan'isa miresaka ny fomba mahafaty olona maro vokatry ny aretina hepatita. Araka ny tatitry ny loharanom-baovao iray, tao amin'ny HealthGrove, vohikala iray manolotra vaovao ara-pahasalamana ary manome tombatombana ny tahan'ireo olona mivesatra aretina, raha ny tombatombana dia manana taham-pahafatesana 0.9 isaky ny 100.000 i Tanzania vokatry ny aretina hepatita. Raha mifototra amin'io izany dia olona 500 amin'ny mponina eo amin'ny firenena no maty isantaona vokatr'io aretina hepatita io.
Ny angondrakitra momba ny hepatita nomen'ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana dia maneho fa eo amin'ny 1%-n'ny olona tratran'ny aretina hepatita B amin'ny ankapobeny (olona 2.7 tapitrisa) no voan'ny VIH manerana izao tontolo izao. Somary ambonimbony ny tahan'isa ao Tanzania, satria 2.8% amin'ireo izay nanao fitiliana no hita fa sady voan’ ny aretina hepatita B no misy tsimokaretina VIH araka ny vokatry ny karoka natao izay nivoaka tao amin'ny BioMed Central.
Ny fandrakofan'ny Media io aretina io ao Tanzania dia nanisy tsindrimpeo tamin'ny filazàna azy io ho toy ny “krizim-pahasalamam-bahoaka” mihitsy, arahana lahatsoratra vitsivitsy izay mamaritra azy ho “mpamono milamina” satria marary mandritra ny dimy hatramin'ny 10 taona eo vao fantatra fa voan'ny aretina hepatita mitaiza ilay olona.
Tatitra maro samihafa teny anatin'ireo media teo an-toerana, anisan'izany ity lahatsoratra ity tao anatin'ny gazety The Guardian, no milaza fa avo roa heny no mety hahavoan'ny aretina hepatita sy ny tsimokaretina VIH an'ireo Tanzaniana, izay matetika vokatry ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy voaaro.
Sarinà lahatsoratry ny gazety The Guardian “Mampitandrina ny Tanzaniana ireo Dokotera momba ny fiparitahan'ilay aretina mpaningotra ain'olona tsikelikely.”
Manome fampitandremana ny Dokotera hoe tena kely sisa dia misedra krizim-pahasalamana lehibe nohon'ny fiparitahan'ny tsimokaretin'ny hépatita, izay voalaza ho mpaningotra ain'olona tsikelikely, noho izy io mifindra haingana dia haingana sy taraiky be vao voatilin'ny mpitsabo ny fisiany
Maro ve ireo Tanzaniana no matin'ny aretina hepatita nohon'ny aretina VIH/SIDA? Tsia.
Nohon'ny fisian'ireo media Tanzaniana izay manao resaka tsara lahatra mampivarahontsana manodidina ny resaka hepatita, dia te-hametraka fanontaniana izahay hoe , mety hiteraka “krizy ara-pahasalamana lehibe” izay mety handrahona ny rafitra fitsaboana misy eo amin'ny firenena ve io aretina io?
Ny Pesacheck dia nanao fanadihadiana mikasika ilay fanambarana hoe ny aretina hepatita no miteraka fahafatesan'olona maro nohon'ny VIH ao Tanzania ary nahita izy fa TSY MITOMBINA izany noho ireto antony manaraka ireto:
Raha nanao jery todika ny angondrakitra avy amin'ny Ivontoerana mandinika ny halavan'ny fahelàna velon'ny olona eto an-tany sy ny fanombatombanana an'ireo anton'ny fahafatesana ao Tanzania nanomboka tamin'ny taona 1990 hatramin'ny taona 2015, dia voaporofo fa ny VIH/SIDA no tompon'andraikitra tamin'ny 12.5%-n'ny fahafatesan'ny ankamaroan'ny olona rehetra maty tao amin'ny firenena tamin'ny taona 2015, raha 0.6% teo ho eo kosa ny taham-pahafatesan'ny olona rehetra voan'ny aretina cirrhosis sy ireo tratran'ny aretina hepatita B sy C nandritra io fotoana io ihany.
Nampiseho ihany koa ireo angondrakitra nomen'ny HealthGrove fa nihena 24.6% ny fahafatesana vokatry ny aretina hepatita B isaky ny olona 100.000 ao Tanzania nanomboka tamin'ny 1990 hatramin'ny 2013, izany hoe salanisa 1.1% isan-taona. 7.9 amin'ny lehilahy miisa 100.000 no maty tamin'ny 2013, somary ambony ny salanisan'ny taham-pahafatesana eo amin'ny lehilahy raha oharina amin'ny vehivavy, izay 2.1 amin'ny vehivavy miisa 100.000. Ny anton'izany dia satria vao maika mananosarotra ny fitsaboana ny aretina hepatita vokatry ny fisotroana tafahoatra zava-pisotro misy alikôla, izay mihanaka be kokoa any amin'ireo lehilahy nohon'ny any amin'ireo vehivavy.
Tsy azo lavina fa olana goavana eo amin'ny resaka fahasalamana ao Tanzania io aretina hepatita io. Ny tatitra momba ny andron'ny hepatita maneran-tany nataon'ny OMS dia mampiditra ny firenena ho anatin'ireo 17 hafa izay manana taha ambony amin'ny fanjakàn'ny aretina hepatita ary manome ny 70% ny vesatr'io aretina io erantany.
Marina mihitsy ny ataon'ny media eo an-toerana, mampitandrina ny vahoaka ny amin'ny loza ateraky ny aretina hepatita. Kanefa, ny tohankevitray dia hoe adinon'ireo mpilaza vaovao ao an-toerana ny zavamisy momba ny fihenan'ny fihanaky ny aretina hepatita. Ny mety mahatonga izany dia satria sarotsarotra kokoa ny mahazo torohay momba ny fihanak'io hepatita ao an-toerana raha oharina amin'ny VIH/SIDA, ary izany indrindra no manahirana ny fampitahàna azy roa ireo.
Toa mifototra amin'ny angondrakitry ny OMS amin'ny ankapobeny ho an'ny taona 2017 ny fanambarana nataon'i Dr. Lwegasha izay maneho fa miha mihanaka erantany ny tsimokaretina hepatita, nahafaty olona miisa 1.34 tapitrisa tamin'ny 2015 — azo ampitahaina amin'ny isan'ny olona maty voan'ny aretina raboka —ary mihoatra ny isan'ny olona namoy ny ainy vokatry ny aretina VIH, izay miisa 1 tapitrisa eo ho eo manerantany.
Samihafa amin'izany ny toedraharaha ao an-toerana ao Tanzania, satria ny aretina VIH/SIDA sy ireo olana maro hafa mifandraika amin'io aretina io no mahafaty olona bebe kokoa nohon'ny fitambaran'ny aretina hepatita A, B ary C, ary koa ireo aretin'ny voa.
Noho izany, DISO ny filazàna fa maro ny olona matin'ny hepatita nohon'ny VIH/SIDA ao Tanzania . Porofoin'ny tarehimarika fa raha toa ka mihamitombo ny tahan'isan'ny fifindràna sy fianahan'ny aretina hepatita, dia mihamiakatra ihany koa amin'ny ankapobeny ny isan'ireo mamoy ny ainy vokatry ny aretina VIH/SIDA. Ankoatra izany, mahatratra 98% izao ny tahan'ny fiarovana amin'ny aretina hepatitita B vitan'i Tanzania ho an'ny zaza menavava, midika izany fa mety hihena io fianahan'ny aretina io any aoriana any.
Tinareo ve ny hitadiavanay porofo hanamarinana ny zavatra nambaran'ny mpanao politika na olona iray manampahefana mikasika ny volam-panjakana? Fenoy ity taratasy ity, na mifandraisa amin'ny iray amin'ireo olona voasoratra etsy ambany ireo, ary hanampy anareo izahay tsy ho voarebireby saina momba izany.
Nosoratan'i Belinda Japhet, miasa ao amin'ny Pesacheck ity tatitra ity, izy dia mpanolotsaina amin'ny resaka fifandraisana, mpamoaka lahatsoratra amin'ny aterineto ao Tanzania. Ny sary torohay dia nataon'i Brian Wachanga, izay sivily Keniana mpahay teknolojia, liana amin'ny fanehoana an-tsary ny angondrakitra ary miasa ho an'ny vohikala PesaCheck. Navoakan'i Eric Mugendi , Talen'ny famoahana lahatsoratra ao amin'ny vohikalan'i PesaCheck ity tatitra ity
Ny PesaCheck, izay noforonin'i Catherine Gicheru sy Justin Arenstein, no voalohany amin'ny fandraisana andraikitra iray ao Afrika Atsinanana ho fanamarinana ny tena zavamitranga. Natao hanampy ny vahoaka hahay hanavaka ny zava-misy marina sy ny eritreritra fotsiny mandritra ny fanambarana atao eny imasom-bahoaka mikasika ireo tarehimarika izay mamolavola ny tontolontsika, tsindriana manokana amin'izany ny fanambaràna imasom-bahoaka momba ny volam-panjakàna izay eritreretin'ny governemanta fa ‘Tanjona ho amin'ny SDG, Fampandrosoana Maharitra’, na ny asam-panjakàna, toy ny fitsaboana, fampandrosoana ny any ambanivohitra ary ny fahazoana rano / fidiovana. Sedrain'ny PesaCheck ihany koa ny fahamarinan'ny tatitra voalazan'ny media. Raha mbola te-hikaroka hahafantatra bebe kokoa momba ireo tetikasa hafa ianao dia tsidiho ny pesacheck.org.